सात महिना पछि चोलेन्द्र सँग प्रचण्डले यसरी लिए बदला ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
सात महिना पछि चोलेन्द्र सँग प्रचण्डले यसरी लिए बदला !
जेठान प्रकरणमा नमज्जा सँग फसेका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कुर्सि धरापको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।
प्रधानन्यायाधिश राणा माथि राजिनामाको लागी चर्को दबाव बढेको छ । राजिनामा नदिए महाअभियोग सम्मका लागी खबरदारी गरिएको छ ,समग्रमा उनलाई कुनै पनि हालतमा तत्काल प्रधानन्यायाधिशको कुर्सि बाट हटाउँन ठूलै मिसन चलेको छ ।
चोलेन्द्रका जेठान गेजन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउँने खेल बाट सुरु भएको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । जेठानले मन्त्री बाट राजिनामा दिएका छन् तर ज्वाइँको पनि कुर्सी अब धेरै दिन टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
चोलेन्द्रलाई अहिले प्रधाननन्यायाधिशको कुर्सिबाट हटाउँन सबैभन्दा ठूलो रोल सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले खेलेको चर्चा सुरु भएको छ । केहि दिन अघी मात्रै प्रचण्डले राती गएर चोलेन्द्रलाई भेटेका थिए र भेटघाटको खबर प्रचण्डकै सुत्र बाट बाहिर ल्याइएको बताइन्छ ।
चोलेन्द्र, प्रचण्ड भेट पछि यो विषय फेरी तातेको छ । राणालाई सत्ता सँग बार्गेनिङको आरोप जबर्जस्ती लगाइएको छ । जबकी भेट चोलेन्द्रको होइन प्रचण्डको चाहनामा भएको खुलासा भएको छ । शिर्ष नेताले भेट्न आउँछु भने पछि आफुले नआउनुस भन्न नसकेका कारण भेटघाट भएको राणाले भनेका छन् ।
स्रोतले ओटीभी नेपाललाई दिएको जानकारी अनुसार चोलेन्द्रलाई जसरी पनि प्रधानन्यायाधिश बाट हटाउन प्रचण्डले हर सम्भव खेल खेलेको बताइन्छ । प्रचण्डले चोलेन्द्र सँग सात महिना अघिको रिसको बदला अहिले लिने योजना बनाएको वुझिन्छ ।
प्रचण्डलाई चोलेन्द्र सँग सबैभन्दा ठूलो रिस फागुन २३ गतेको फैसला सँग उठेको बताइन्छ । त्यस बखत एमाले र माओवादी विचको एकता सर्वोच्चले खारेज गरेर ऋषि कट्टेललाई आधिकारीकता दिएको थियो । सो फैसलाको पुनरावलोकनका लागी प्रचण्डले दिएको निवेदन प्रधानन्यायाधिश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर खारेज गरिदिएका थिए।
राणाकै फैसलाका कारण आफ्नो र माओवादीकै अस्तित्व समाप्त हुन लागेको निष्कर्ष निकालेका प्रचण्डले चोलेन्द्र सँग बदलाका लागी उपयुक्त मौका खोजेर बसेको र अहिले त्यो मौका मिलेका कतिपयको अनुमान छ ।गजेन्द्र हमाल काग्रेस कोटा बाट मन्त्री बनेको भनेर प्रचण्डलेनै डिफेन्स गर्दै हिँडेका थिए ।
प्रचण्डले बाहिर देखाउँन त्यसो भने पनि हमाललाई प्रयोग गरेर चोलेन्द्रलाई पासो थाप्ने डिजाइननै उनको भएको बताइन्छ । यो मामलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि प्रचण्डको डिजाइनमा फसेको स्रोतको दावी छ । राणाले कार्यपालीकामा भाग खोजको समाचार प्रनि प्रचण्डको सुत्र बाट मडियामा पुगेका दावी स्रोतले ओटीभी नेपाल सँग गरेको छ ।
आफ्नो मिसन पुरा हुने अवस्था नजिक आए पछि प्रचण्डले आइतबार साँझ गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानून व्यवसायी एशोसिएसनमा आबद्ध केही कानून व्यवसायीसँग दाहालले राणालाई कुनै पनि हातलमा हटाउनु पर्ने र त्यसका लागि आवाज उठाएकाहरुलाई आफूहरुले पनि साथ दिने वचन दिएको खबर बाहिर आएको छ।
छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ लगायका ८ कानून व्यवसायीहरु सहभागी थिए । छलफलमा राणालाई हटाउने, त्यसपछि एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाई उनको पालामा भएका अनियमितताका बारेमा छानबिन गरी सके भ्रष्टाचारमा समेत मुद्दा चलाउनु पर्ने विषय समेत उठेको थियो ।
छलफलमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्दा तत्काल निरुपण गर्ने, नियुक्तिहरु खारेज गराउने देखि विभिन्न नेताहरुको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि सकारात्मक रुपमा कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा परामर्श भएको थियो । हालको समस्याको एक मात्र दोषी प्रधानन्यायाधीश राणा नै भएको भन्दै अध्यक्ष दाहाल लगायत अन्य कानून व्यवसायीले राणा केही दिन बिदामा बसे अन्य न्यायाधीशहरुबाट यो विषयमा निकास खोज्नु पर्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए ।